तेस्रो त्रैमाससम्ममा अरुण काबेली पावरको खुद नाफा ४ गुणाले बढ्यो
वैशाख १६, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म अरुण काबेली पावरले रू. २० करोड ३२ लाख ९३ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
गत वर्ष उक्त अवधिसम्म कम्पनीको यो नाफा रू. ४ करोड ५३ लाख ६२ हजार थियो । कम्पनीको बिहीवार सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षभन्दा यसवर्ष खुद नाफा ४ दशमलव ४८ गुणा बढी देखिएको हो ।
यसवर्ष कम्पनीको कुल आम्दानी १३४ दशमलव ६३ प्रतिशत बढेकाले नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । गत वर्ष रू. २२ करोड ५ लाख ४८ हजार कुल आम्दानी गरेको उक्त कम्पनीले यस वर्ष रू. ५१ करोड ७४ लाख ७७ हजार कुल आम्दानी गरेको छ ।
विद्युत् विक्रीबाट गत वर्षभन्दा १३४ दशमलव ८५ प्रतिशत बढी अर्थात् रू. ५१ करोड ६९ लाख ३५ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले अन्य स्रोतबाट २६ प्रतिशत बढी रू. ५ लाख ४२ हजार आम्दानी गरेको हो ।
यसवर्ष ५ दशमलव ७१ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख ५० हजार पुगेको छ । जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा यसवर्ष ६ दशमलव ८९ गुणा बढी अर्थात् रू. २० करोड ५७ लाख ६० हजार कायम भएको छ ।
कम्पनीको ऋण रकम गत वर्षभन्दा यसवर्ष ७ प्रतिशत बढी अर्थात् रू. ३ अर्ब ४० करोड ५३ लाख ६७ हजार रहेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १७ दशमलव शून्य ९ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११२ दशमलव ९८ रहेको छ ।